Blessing Trading Company | EXPORTER & IMPORTER
BLESSING TRADING CO., Ltd established on 2004, which gives birth by 786 trading sole proprietary founded on 1990. Its founder , sole proprietor and chairman is “ HAJI U Maung Mya “B.S.c, who is the sole agent of S.I.Lesaffre .
The main objective of company business is export & import. The export is all kinds of beans and pulses. The import is whole sale and retail of bakery & confectionery and also dealers in all kind of chemical , chemicals for food alieid industries .
ချစ်ခင်မြတ်နိုးသော ဖောက်သည်များ ...
BLESSING TRADING Co., Ltd. (ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ကုမ္ပဏီ)၏ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူ တစ်ယောက်အနေဖြင့် ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာ သတင်းကောင်းကို ကြေညာပါရစေ။ လူကြီးမင်းများအတွက် နည်းပညာ အချက်အလက်များကို LESAFFRE နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ ဤဆာ့ဖ်သတင်းလွှာကို အလေးဂရုစိုက် တင်ပြအပ်ပါသည်။
ဆာ့ဖ်သတင်းလွှာမှတစ်ဆင့် မတူညီကွဲပြားမှု အမျိုးမျိုးအား ရုပ်ပုံများဖြင့် ဖော်ပြ၍လည်းကောင်း၊ ဈေးကွက်အခြေအနေ နည်းပညာ အချက်အလက်များအား ဖော်ပြ၍လည်းကောင်း၊ သင်တို့၏ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးထားသည့် နည်းလမ်းကောင်း ဖြေရှင်းချက်များကို ဖော်ပြ၍လည်းကောင်း၊ ထို့အပြင် လူတွေ့မေးမြန်းမှုများ၊ မုန့်လုပ်နည်း အချိုးအစားများအတွက် ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ အကြံဉာဏ်သစ်များ ကဏ္ဍအပါအဝင်၊ ဈေးကွက်သစ်များဖြင့်ပါ ဝေဝေဆာဆာ ဖော်ပြထားပါသည်။